स्वदेश फर्किरहेका आप्रवासी कामदारहरूको पक्षमा एकजुट भई हौसला बढाउन राजेश हमालको अनुरोध | Kendrabindu Nepal Online News
११ असार २०७७, बिहीबार १४:५१
लकडाउनका कारण लामो समयदेखि विदेशमा अड्किएका नेपालीलाई सरकारले फर्काइरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमण भएका देशबाट नेपालीलाई ल्याइँदा उनीहरूबाट नै नेपालमा रहेका नेपालीलाई कोरोना सर्ने डर मान्दै उनीहरू प्रति वितृष्णा फैलिरहेको छ । उनीहरूलाई फर्काएर ल्याएपछि सरकारले उचित व्यवस्थापन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा एक किसिमको त्रास बढेको हो ।
यसैबिच महानायक राजेश हमालले विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकलाई स्वागत गर्न आह्वान गरेका छन् । युनिसेफको ‘हाम्रो नमस्ते’ अभियानमा सहभागी हुँदै हमालले कोरोना भाइरसको महामारीमा दिनहुँ घर फर्किरहेका नेपालीलाई नमस्तेसहित न्यानो स्वागत गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
उनको यस अभिव्यक्ति सहितको सार्वजनिक भिडियोमा हमाल भन्छन्, ‘अनिश्चितता र चुनौतीको यो समयमा देशका हजारौँ नागरिकहरू सुरक्षा तथा सहायताका खोजीमा आफ्नो घर फर्किरहेका छन् । उनीहरू कसैको आमाबुवा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी हुन् । तर जब आयो अनायास त्रास कोरोनाको, किन भए उनीहरू पराया झैँ एक छिनमै ? के यसैलाई भनिन्छ परिवार ? मानेकै हो हामीले प्रेम र स्नेहको हार ?’
हमालले यो ऐक्यबद्धताको लागि जुट्ने समय भएको भन्दै स्वदेश फर्किरहेका आप्रवासी कामदारहरूको पक्षमा एकजुट भई उनीहरूको हौसला बढाउन अनुरोध समेत गरेका छन् ।
Rajesh Hamal यांनी वर पोस्ट केले मंगळवार, २३ जून, २०२०
rajesh hamal corona, rajesh hamal hamro namaste
Prevटोखामा चक्कु प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या
न हिउँद, न वर्षामा सुरक्षित छ मनाङको सडकNext